Xaaladda Marka oo maanta deggen kadib dagaal xalay ka dhacay - Halbeeg News
Xaaladda Marka oo maanta deggen kadib dagaal xalay ka dhacay
MARKA (HALBEEG) – Xaaladda magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose ayaa saaka deggen, kaddib dagaal xalay qaybo kamid ah magaaladaas ku dhex maray Ciidamada Xoogga Dalka iyo mileeshiyaad ka tirsan Ururka Al shabaab.
Dagaalkii xalay dhacay oo ahaa mid xooggan islamarkaana socdey muddo saacad ku dhow, wuxuu bilowday markii dagaalyahanno Al shabaab ka tirsani ay magaalada dhowr jiho kasoo weerareen.
​Xasan Macallin Cumar​ oo ah guddoomiyaha Marka, ayaa qaar kamid ah warbaahinta Xamar ka hawlgasha u sheegay in uusan jirin haba yaraatee wax khasaare ah oo dhanka ciidamada kasoo gaaray dagaalkii xalay.
Wuxuu sidoo kale sheegay inay fashiliyeen isku dayga kooxda weerarka soo qaadday si xooggana ay isaga caabiyeen, ugu dambeyntiina ku khasbeen inay u baxsadaan dhinaca duurka oo markii horeba ay ka yimaadeen.
“Alxamdulillaah waa nabad qabnaa xaaladda degmadana saaka waa caadi, nimanka xalay waxay isku dayeen inay weerar gaadmo ah soo qaadaan, xabbado dhowr ah ayey soo tuurtuureen laakiin siday doonayeen uma noqon oo ciidanka waa iska caabiyeen, wax khasaare ah oo nasoo gaaray xaggeena ma jirto” guddoomiyaha Marka ayaa sidaas yirir.
Xog badan lagama hayo khasaarha gaaray dhinaca Al shabaaab, haseyeeshee qaar kamid ah shabakadaha internetka ee taageera Al shabaab ayaa baahiyey in dagaalkii xalay lagu dilay ku dhowaad toban askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda.
Qaar ka mid ah odiyaal Al-shabaab ay afduubeen oo soo baxsaday